15ka Foomka Booska Hudheelka ugu Fiican WordPress Plugins | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/15 Foomka Booska Hudheelka ugu Fiican WordPress Plugins
15 Foomka Booska Hudheelka ugu Fiican WordPress Plugins
Had iyo jeer waa wakhtiga fasaxa. Yaa aan diyaar u ahayn inuu qaato dhawr toddobaad oo fasax ah si uu u nasto, u booqdo qoyska, ama u tamashle tago? Hudheelkaaga iyo meheradaha ku salaysan soo dhawaynta waa inay diyaar u ahaadaan inay aqbalaan boos celis dhib maaha wakhtiga sanadka. Taas oo macnaheedu yahay hadda waa waqtigii ugu fiicnaa ee cusbooneysiinta degelkaaga.
Website-ka huteelka waa inuu u fududeeyaa martida si ay u eegaan guriga, u fiiriyaan qolalka, arkaan liiska adeegyada oo ay ugu muhiimsan tahay inay qol qabsato. Ujeedka oo dhan ee lahaanshada mareegaha huteelkaaga ama meheradda ku salaysan martigelinta waa in la sugo boos celin, si taas loo sameeyona waxaad u baahan doontaa foom ballansan oo fudud. Haddii aadan horay u isticmaalin mid ka mid ah mawduucyada WordPress ee hoteelka ugu fiican, ama haddii aad jeceshahay mawduucaaga WordPress ee hadda, waxaad si fudud ugu dari kartaa foom ballansan degelkaaga WordPress oo leh foom ballansan. Waxaan soo indha-indhaynnay shabakadda, oo hoos waxaa ah taladayada loogu talagalay foomamka ballansashada lacagta ee bilaashka ah ugu fiican ee WordPress plugins. Ku raaxayso!
1. MotoPress Huteelka Booska & Kiraynta Guryaha
MotoPress Hotel Boos plugin waa habka ugu dambeeya ee boos celinta WordPress ee milkiilayaasha guryaha kirada ah. Haddii aad kireysato dhisme kasta oo hoyga ah, noqo hudheel, B&B yar ama kiro fasax, waxaad isticmaali kartaa plugin si aad u abuurto liiska guryaha aan xadidnayn oo leh dhammaan adeegyada, adeegyada, sawirrada, iwm. Intaa waxaa dheer, waxaad abuuri kartaa dhab- foomka helitaanka wakhtiga raadinta kaas oo maamuli doona xakamaynta alaabada oo toos ah. Plugin-ku wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ku xaqiijiso ballan-qaadkaaga lacag-bixin (PayPal, 2Checkout, Braintree, Stripe, Beanstream/Bambora, iwm) ama gacanta (imayl ahaan).
Waxyaabo kale oo weyn, waxaad si toos ah ula jaanqaadi kartaa kiradaada ku qoran OTA-yada kala duwan oo aad si toos ah u ballansanayso website-kaaga, sidaas darteed, waxaad si fudud uga fogaan doontaa buug-buujin. Waa maxay run ahaantii muhiim u ah ilaalinta dhammaan kharashyada, plugin wuxuu la yimaadaa nidaam dhamaystiran oo canshuuraha, khidmadaha, taariikhda lacag bixinta ee boos celin kasta, iwm. Nidaamka dejinta binta sidoo kale waa dabacsanaan - qiimo dhimis, binta xilliyeed, rates, kala duwan xeerarka ballan-qaadka caadiga ah iyo kuwo kale. Waxa kale oo aad tijaabin kartaa nooca bilaashka ah, laakiin waxa ay la socotaa doorashooyin yar.
2. VikBooking Hudheelka Booska Engine & PMS
Iyada oo la adeegsanayo plugin-ka VikBooking, waxaad dejin kartaa nidaam boos celin lagu kalsoonaan karo oo huteelkaaga ah waqti yar ka dib. Nooca bilaashka ah ee plugin waxaa ka mid ah xulashooyinka gudaha ee noocyada qolka, qiimaha gaarka ah, jadwalka helitaanka, joogitaan, luqadda iyo shaqooyinka tarjumaada, oggolaanshaha doorka isticmaale (sidaas darteed qofna kaliya ma heli karo nidaamka ballansashada) iyo 8 fududahay in la isticmaalo kood-gaaban. Oo haddii aad u cusboonaysiiso VikBooking Pro waxaad awoodi doontaa inaad ku maarayso ballan-qaadyadaada xaddidaadyo dheeri ah (joogitaanka ugu yar, wakhtiga imaatinka, iwm), heerarka xilliyeed, in ka badan 60 ikhtiyaarka albaabka lacag bixinta, ogeysiisyada SMS, iyo hawlaha diiwaangelinta . Pro waxa kale oo uu bixiyaa garaafyo waxtar leh, stats iyo warbixinnada PMS si loo arko sida ganacsigaagu u socdo.
3. Jadwalka Jadwalka & Foomka
Jadwalka Jadwalka waxaa laga yaabaa inuu yahay kalandarka ballansashada bilaashka ah ee ugu caansan ee laga heli karo WordPress.com. Plugin bilaashka ah waxaa ka buuxa astaamo aad u fiican oo aad hubto inaad faa'iido u heli doonto. Samee tiro kasta oo jadwal ah oo ay ku jiri karaan foomamka ballansashada gaarka ah. Sidan martidu waxay ku dooran karaan joogitaankooda iyagoo isticmaalaya maalmaha jadwalka ku jira, buuxinaya boosaska foomamka, oo ay soo gudbiyaan boos celintooda. Ka dib markaad gudbiso foomka martidaada iyo maareeyahaaga mareegahaagu waxay heli doonaan iimaylka xaqiijinta, maamulaha ayaa markaa aqbali kara ama diidi kara boos sii qabsiga (oo maareeyo dhammaan codsiyada boos celinta) ee fudud ee isticmaalka guddiga ballansashada.
4. Huteelka HBook
HBook waa ikhtiyaar aad u fiican martigelintaada ama mareegaha hoteelka. Plugin-kan xoogga badan wuxuu u fududeeyaa martidaada inay qolalka ka ballansadaan degelkaaga WordPress. Jadwalka boos celinta ee buuxa iyo foomamka ballansashada ee aad ku dhisto HBook. Kaliya rakib plugin oo bilow abuurista jadwal sare iyo foomamka leh qolal la heli karo, shuruudaha iyo shuruudaha, filtarrada qiimaha, filtarrada qolka, waxyaabaha lagu daro, koodhadhka kuuban, shuruudaha joogitaanka min/max, shuruudaha caadiga ah iyo heerka xilliyeed, dhigaalka boos celinta, kharashka nadiifinta , iyo qaar kaloo badan.
5. Nidaamka Boos-dhigista
Haddii aadan hubin inaad weli diyaar u tahay Booska Nidaamka PRO, waxaad had iyo jeer ku bilaabi kartaa noo nooca bilaashka ah. In kasta oo aanay ku jirin sifooyin badan sida nooca premium, Nidaamka Booska ee bilaashka ah ee WordPress waxa ku jira kalandarka boos celinta ee dhamaadka halkaas oo martidu ay dooran karaan taariikhdooda, ku dari karaan koodhka kuuban ama qiimo dhimis, iyo lacag bixinta oo dhamaystiran PayPal. Tani waa hab fiican oo lagu daro jadwalka ballansashada boggaaga maanta, ka dibna loo cusboonaysiiyo nooca PRO wakhti dambe.
6. Foomka Bookiska
Booki waa foom ballansan oo qaali ah oo qurxoon iyo kalandarka WordPress. Nidaamkan boos sii qabsiga ee horumarsan waxa uu la qabsanayaa isticmaalayaasha aagga wakhtiga, si ay u arkaan waxa la heli karo wakhtiga dhabta ah. Marka laga eego dhinaca martida, Booki waxa uu fududeeyaa doorashada taariikhda safarka, aragta liisaska la heli karo, oo uu lacag ku bixiyo PayPal ka dib marka uu helo qaansheegta. Plugin-ku waxa kale oo ka mid ah 24 mawduucyo midab leh, tirokoob maamul oo horumarsan (wadarta boosaska, cadadka la kasbaday, qiimo dhimis la bixiyay, iwm). Intaa waxaa dheer plugin-ku waa tarjumaad diyaar ah si aad ugu beddeli karto luqad kasta oo aad u baahan tahay adigoo isticmaalaya faylka .po ee ku jira!
7. WP Jadwalka Booska Fudud
Jadwalka Booska fudud ee WP waa waxa uu u eg yahay - jadwal fiican oo fudud oo ku rakibida WordPress. Maamul kiraynta qolkaaga iyo sii qabsashada adiga oo abuuraya jadwal boos celin ah intaad u baahan tahay. Waxaad xitaa ku meelayn kartaa isticmaalayaasha jadwal kasta, markaa haddii aad rabto oo kaliya xubin shaqaale gaar ah si ay u helaan codsiyada macaamiisha waxaad ku dejin kartaa taas adigoo dhowr dhagsi ah. Oo waa in aad weligaa u baahan tahay sifooyin dheeraad ah waxaa jira version premium ee plugin in aad si fudud u cusboonaynta kartaa.
8. Jadwalka Booska WP
Jadwalka boosaska WP ee qiimaha leh ayaa fududeynaya in loo sameeyo jadwal boos celinta huteelkaada ganacsi kale oo martigelin ah. Maalin kasta waxay soo bandhigtaa tirada qolalka furan ama boosaska wakhtiga si isticmaalayaashu ay u arki karaan jaleec haddii taariikhaha ay rabaan la heli karo. Iyada oo la kala dooranayo jadwal aan xadidneyn, boos celin aan xadidneyn oo la heli karo, foomka ballansashada captcha iyo kalandarka WP Booking Calendar waa ikhtiyaar weyn oo loogu talagalay mareegahaaga.
9. Nidaamka Booska WP
Nidaamka Booska WP ee bilaashka ah ee WordPress waa hab fiican oo lagu daro kalandarka ballansashada fudud ama foomka goobta martigelinta. Plugin-ku wuxuu u oggolaanayaa martida inay sameeyaan boos celin ku salaysan maalin kasta oo ay ku jirto si sahlan loo fahmi karo codeeynta midabka maalmaha la heli karo iyo kuwa la ballansan yahay. Oo marka isticmaaluhu dhammeeyo codsiga boos celinta, waxaad heli doontaa ogeysiis ballan ah isla saxan dashboardkaaga WordPress halkaas oo aad si dhakhso leh u abaabuli karto oo aad u maareyn karto dhammaan boos celintaada.
10. Buugaagta WordPress ee Buug-gudbinta iyo Jadwalka
Bookly waa xal ballan-qaadis oo dhan-in-hal ah, ka qaadashada macaamiisha si sax ah dariiqa loo marayo habka ballan-qaadka oo dhan ilaa lacag bixinta. Foomamka ballan-qaadashadu waa kuwo fudud oo qurux badan, oo ay u fududahay booqdaha inuu fahmo. Waxaad ku dari kartaa tiro aan xadidnayn oo adeegyo ah iyo xubnaha shaqaalaha booqdaha uu ka doorto, oo ay ku jiraan adeeg "qayb" si ay uga caawiso inay helaan waxay raadinayaan. Soo-booqdayaasha waxaa sidoo kale la weydiin doonaa inay bixiyaan dulmar ku saabsan helitaankooda (wakhtiyo, maalmaha shaqada, iyo kala duwanaanshaha taariikhda) taasoo plugin-ku u isticmaali doono inuu keeno liiska boosaska ku habboon.
Marka booqdeha uu ku faraxsan yahay wakhtiga boosaska waxay ka tagi karaan faahfaahintooda ku habboon oo xitaa waxay ku bixin karaan lacag iyagoo isticmaalaya Bookly - bixinta lacag-bixinta waa hab fiican oo lagu yareeyo bandhigyada. Waxaad ku dhex dari kartaa Bookly saddex hab-socodka lacag bixinta: PayPal, Stripe, iyo Authorize.net. Ka dib bixinta lacag bixinta, booqdeyaasha sii qabsashada waa la xaqiijiyay oo waxay helayaan xaqiijinta iimaylka.
Si kastaba ha ahaatee, plugin kaliya maaha mid waxtar u leh booqdayaashaada, sidoo kale waxay leedahay hawlo badan oo dhabarka ah aad isticmaali kartaa. Tusaale ahaan, waxaad ku dari kartaa Bookly iyo Google Calendar si aad u siiso aragti jadwal oo muuqaal ah xubin kasta oo shaqaale ah si uu u arko marka ballammadooda la qorsheeyay. Bookly sidoo kale wuxuu ku siinayaa koontarool dhamaystiran marka xubnaha shaqaaluhu diyaar yihiin si ay uga fogaadaan jaahwareerka iyo carqaladaynta: waxaad jadwal u samayn kartaa wakhtiyada shaqada, nasashada, iyo ciidaha jadwalka taariikhda. Plugin weyn oo ku kordhin kara qiimo badan ganacsiga adeegga ku salaysan.
11. Foomamka Cufnaanta
Foomamka cuf-jiidadka waa mid ka mid ah qaabka ugu talinayaa in lagu dhiso WordPress plugins suuqa, oo la yaab ma leh sababta. Iyada oo leh ikhtiyaaro waaweyn oo loogu talagalay foomamka horumarsan, caqli-gal shuruudaysan, badhamada raadiyaha, xulashooyinka hoos u dhaca iyo in ka badan waxay noqon doontaa gabal keeg ah si aad u abuurto foom codsi boos celin ah oo adiga kuu gaar ah. Oo haddii aad hesho wax-ka-kordhinta premium-ka ee kuuboonnada, Strip iyo/ama PayPal, waxaad xitaa martida ku heli kartaa lacag bixinta foomka boos qabsiga.
12. WooCommerce Hotel Boos
Furaha WooCommerce Hotel Booking plugin waa waxa uu u eg yahay - hab aad uga faa'iidaysato WooCommerce si aad u aqbasho oo aad u maamusho boosaska goobtaada. Iyada oo la rakibay plugin-ka, waxaad isticmaali kartaa WooCommerce si aad ugu darto qolal, la heli karo, maareyso habka soo gelida/bixidda, ku darto xamaasad (sida quraacda, daawaynta spa, ama adeegyada kale) oo aad aqbasho lacag bixinta. Pluginkani sidoo kale waa WPML ku habboon turjumaada fudud wuxuuna la shaqeeyaa albaabada lacag bixinta ee aad ku dartay dukaanka WooCommerce.
13. Boos sii qabsasho iibiye badan
Samee goobtaada boos-ku-qabsiga tooska ah sida Hotels.com ama Booking.com adoo wata Webkul Multi-Vendor Booking plugin (xusuusin: plugin-kan wuxuu u baahday plugin Marketplace Webkul inuu shaqeeyo). Iyada oo la rakibay plugin WooCommerce kordhinta waxaad u abuuri kartaa suuq suuq huteelada kale ee saddexaad, Airbnbs, guri-hoosaadyo, goobo xero, iyo inbadan oo lagu daro qolalkooda. Iyo iyadoo la kaashanayo plugin xubinnimada, waxaad ku dallici kartaa dhinacyadan saddexaad lacag bille ah ama boqolkiiba iyada oo ku saleysan boos celin lagu sameeyay goobtaada.
Quform waa qaab dhisme caan ah oo caan ah oo ay ku jiraan qaab-buukis foomka. Tani waxay kuu sahlaysaa inaad si fudud u dhaqaajiso plugin, dooro templateka oo aad hagaajiso foomka si aad u daboosho baahiyahaaga. Dabcan waxaad ka dhisi kartaa foom khaas ah oo xoqan sidoo kale si aad ugu darto goob kasta iyo dhammaan macluumaadka aad u baahan karto.
15. La xiriir Foomka 7
Iyadoo jadwalka ballansashada kakan uu faa'iido u yeelan karo ganacsiyada qaar ee huteelada iyo warshadaha martigelinta, kuwa kale waxay u baahan karaan oo keliya foomka codsiga ballansashada. Haddii aad raadinayso doorasho fiican oo fudud oo bilaash ah oo dhismo ah, kama fiicnaanayso Foomka Xiriirka 7. Iyada oo wax yar oo caawimaad ah laga helayo dukumentiyada, waxaad ku dari kartaa goobo khaas ah. Ku dar ikhtiyaarka martida si ay u doortaan nooca qolka, goobta guriga, muddada wakhtiga iyo wax ka badan. Foomka la buuxiyay ayaa markaa si toos ah loogu diri karaa sanduuqaaga (ama qof kale) si loo eego oo loo galo nidaamka boos celinta.
Waxaan liis garenay xulashadayada ugu sarreeya ee foomamka ballansashada ugu fiican ee WordPress, laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano waxaad u maleyneyso. Miyaad isticmaashaa mid ka mid ah plugins-yada la sheegay? Mise waxaad ku talin lahayd foom ballansan oo ka duwan plugin WordPress? Noogu sheeg qaybta faallooyinka ee hoose!
Plugins-ka ugu sarreeya ee macaamiisha WP Engine
Barashada Google's Units Ad Responsive